Astaamaha lagu Garto Xidhiidhka Dhabta ah - Daryeel Magazine
Astaamaha lagu Garto Xidhiidhka Dhabta ah
Waa calaamado aad ku ogaan karto inuu qof dhab ka yahay xidhiidhku, balse mid ogow hal ama labo calaamadood oo aad hesho kuma caddayn kartid in xidhiidhkaasi dhab ka yahay amase aanu ahayn. Si aad oga fogaatid dhibaato waa inaad ugu yaraan aragtaa 3 calaamadood oo ka mid ah astaamahaan. Waa in aanad calamadahan u isticmaalin inaad goa’aan ku qaadato balse waa inaad u isticmaashaa oo kaliya inaad ku taageerto go’aankaaga.
Qorshaha waqtiga dheer (mustaqbalka): calaamad aad u weyn oo lagu garto xidhiidhka dhabta ah waa isagoo leh qorshe waqti dheer ah, inta badan ee qofku xidhiidhku dhab ka yahay waxay badisaa inta badan ee uu ka fikirayo mustaqbalka qorshayaalna u samaynayo. dhinaca kale inta badan ee aan qof dhab ka ahayn xidhiidhka jaceyl waxaa badan inta badan ee qofkaasi aanu ka fikirayn mustaqbalka dambe ee xidhiidhkiina.
Ma ka dhabaa jacaylku? haddii aanu dhab ka ahayn xidhiidhku macnaheedu waxay tahay islamarkaana aad u suurtagal ah in aanu qofkaas wax jacayl ah kuu hayn.
La kulanka waalidka iyo asxaabta: mid ka mid ah calaamadaha ku tusi in qofku dhab ka yahay xidhiidhku waa isagoo iskiin bara waalidkiis iyo asxaabtiisa.
Qofka kula wadaaga xogtiisa: marka anau qofku xidhiidku dhab ka ahayn wuxuu isku dayi doonaa inuu iska kaa caabiyo isla markaana aanu kuu sheegin xog aad u badan oo ku saabsan naftiisa gaar ahaan markay noqoto arrimihiisa shakhsiyadeed iyo kuwa u gaarka ah.
Qofka oo badnaa kusoo waca: marka aanay qof dhab ka ahayn xidhiidhku badanaa wuxuu kusoo wici doonaa marka uu rabo inuu kula kulmo oo kaliya amase uu wax kaa rabo oo kaliya marka laga yimaado taa waxaa suurta gal ah inuu qofkaasi kaa dhaco marar badan islamarkaana, xitaa aanu kaa qaban taleefanka, marka aad wacdo.
Qofka oo qorshahiisu cadyahay: marka aanay qofka dhab ka ahayn xidhiidhku waxaa aad usoo suurta gal in aanu kusoo bandhigin dareenkiisa dhabta ah iyo qorshiihisa ku aadan mustaqbalka, tusaale ahaan qofka oo yidhaahda hadalo iska hor imaanaya oo wixii uu hore u yiri u qabta si caksi ku ah sidii uu u yiri.dadka ay dhab ka tahay inay ka dhabeeyaan xidhiidhkooda labac-labac ma geliyaan qorshahooda ku aadan xidhiidhkooda.
Qofka oo aan jahawareerin: marka uu qof u muuqdo inuu ka jaha wareersan yahay xidhiidhkiina, ogow inay jirto suurtagalnimo aad u weyn oo ah inuu aanu sii wadin xidhiidhkiina. Dadku waxay wax ku jahawareeraan oo kaliya marka aanay 100% ku qanacsanayn waxa ay haystaan
Daacadnimo: Qofka oo ku sira been kuu sheega, ama ku khiyaameeyaa waa calamadaha lagu garto in qofkaa aanu xidhiidhkiina dhab ka ahayn. Haddii qofku daacad yahay badanaana aanu been kuu sheegin fursadaha uu qofkaasi kugu khiyaamayn karaa aad bay u yartahah, haddii xidhiidhka dhab ka yahayna si daacad ah buu kuugu sheegi doonaa.
W/Q: Cabdirisaaq Faarax
Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah Astaamaha Lagu Garto Aabaha Wanaagsan Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb
si kasoo horjeeda sida dad badani aaminsan yihiin jaceylka waa la kaantarooli karaa. Tan macnaheedu …